“ယခုအချိန်မှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်အပေါ်အများသဘောဆန္ဒကိုတွေ့ရှိပြီးဖြစ်တာမို့ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့အနေအထားရှိဖို့ရာအရေးကြီးပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိအရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ကိုယ်စားလှယ်က ရှေ့သို့မြန်မာအစီအစဉ်၏လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်သည့် DRI အဖွဲ့၏ ဇူလိုင်လအတွင်းကကျင်းပပြုလုပ်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင်ပြောကြားသည်။
Promoting Multiparty Policy Dialogue for the Peace Process
Political parties are inaunique position to contribute to the establishment of Myanmar’s future political framework, through their participation in the Union Peace Conference. Yet without joint policy discussions and preparation, it will be difficult for parties to makeameaningful contribution to the ongoing political dialogue.
နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတွင်တက်ရောက်ပါဝင်သည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမူဘောင်ရေးဆွဲချမှတ်ရာတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် များစွာကောင်းမွန်သောအနေအထားတွင်ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း မူဝါဒဆိုင်ရာပူးတွဲဆွေးနွေးမှုများနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများမရှိပါက နိုင်ငံရေးပါတီများအဖို့ ကျင်းပလျက်ရှိသောနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်နိုင်ဖို့ရာ ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
Reforming Municipal Elections in Yangon: Although Myanmar has held successful national elections (2015) and by-elections (2017), municipal politics have remained comparatively undemocratic. At the request of the Chief Minister of Yangon, International IDEA is providingacomparative analysis of municipal electoral frameworks and an analysis on the current electoral framework for the Yangon City Development Committee (YCDC).
International IDEA ၏ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ သြဂုတ်လအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲများပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်း။ ။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတို့အား အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှာ နှိုင်းယှဉ်ရလျှင် ဒီမိုကရေစီမဆန်သေးသောအနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်၏တောင်းဆိုမှုအရ International IDEA သည် စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမူဘောင်များအပေါ်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်စီစစ်ချက်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမူဘောင်တို့အပေါ်လေ့လာသုံးသပ်ချက်တို့အား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
Scholar Institute မှ အကြီးတန်းသင်တန်းဆရာ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုပြည့်စုံနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီနေ့။ ။မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအပေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်များ
ဒသမအကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ရှေ့သို့မြန်မာအစီအစဉ်၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ပက်သက်သည့်ဆွေးနွေးပွဲအား စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။